‘छक्का पन्जा २’को कथावस्तुमा के छ त्यस्तो त्रुटि ? | Emedia Hub UK
Home Entertainment ‘छक्का पन्जा २’को कथावस्तुमा के छ त्यस्तो त्रुटि ?
नेपाली कथानक चलचित्र छक्का पन्जा २ को कथावस्तुमा कानूनी रुपमा त्रुटि देखिएको भन्दै कानूनी व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् ।
कथानक चलचित्रमा नाटकीयपन हुने भएपनि यथार्थलाई जस्ताको तस्तै नदेखाइँदा भ्रम उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । यो चलचित्र धेरैले मन पराएकाले अदालती प्रक्रियामा भ्रम सिर्जना हुनसक्ने देखिएको छ ।रातोपाटीबाट